PREPERSE - Pigment gadziriro dzekupenda purasitiki |Iyo kambani Ningbo Precise Colour Co., Ltd.
Inoshandiswa kugadzira masterbatch, zvakare inogona kushandiswa yakananga mujekiseni molding uye extrusion nemuchina mumwe chete screw.Yakakurudzirwa polyethylene, uye inobvumirwa kupenda polypropylene, polyvinyl chloride.
Yakakurudzirwa kupenda mapurasitiki epurasitiki ayo anokumbira kuita kwakanyanya paFilter Pressure Value (FPV), senge PE cast film, firimu rakatetepa etc. Kuti uwane zvakanakira dispersibility, isu tinokurudzira mutengi kugadzirisa nemapatya-screw muchina, kugadzira mono masterbatch.
Inoshandiswa kugadzira masterbatch.Yakakurudzirwa kupenda polypropylene, ne single screw muchina kana mapatya screw muchina wekuumba jekiseni uye extrusion nezvimwe.
Yakakurudzirwa kupenda polypropylene iyo inokumbira yakanyanya FPV kuita, kazhinji polypropylene fiber masterbatch.Kuti uwane zvakanakira dispersibility, isu tinokurudzira mutengi kugadzirisa nemapatya-screw muchina, kugadzira mono masterbatch.
Pigment yemukati inopfuura 85%.Inoshandiswa kupenda polyethylene terephthalate (PET) masterbatch.Preperse PET akateedzera pigment gadziriro ine yakanakisa dispersibility, ari akakosha mhinduro kune dzakakomba maapplication, senge polyester fiber uye nhete yePET firimu nezvimwe.
Inoshandiswa kugadzira polyamide.Inotenderwa kupenda PA fiber masterbatch.Pigment yemukati inobva pa85% kusvika 90%, zvinoreva kuti yakaderera zvakanyanya kuwedzera muzvigadzirwa.
KUTI ZVIMWE ZVINO.